सबैभन्दा धेरै वर्षा भएका ठाउँ, कहाँ कति वर्षा ? – Namaste Dainik
सबैभन्दा धेरै वर्षा भएका ठाउँ, कहाँ कति वर्षा ?
July 21, 2020 July 21, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सबैभन्दा धेरै वर्षा भएका ठाउँ, कहाँ कति वर्षा ?
आइतबारदेखि देशका सबैजसो ठाउँमा लगातार झरी पर्न सुरु भयाे । मङ्गलबार भने झरी पर्न रोकिएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा दिउँसो केहीबेर घाम पनि लाग्यो । तर फेरि राति पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । तीन दिन लगातार परेको वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गएको छ ।
सबैभन्दा धेरै नवलपरासीकोडण्डामा वर्षा भएको वरिष्ठ मौसमविद् डाक्टर इन्दिरा कँडेलले बताउनुभयो । नवलपरासीको डण्डामा तीन दिनमा तीन सय ५१ दशमलव २ मिलिमिटर पानी परेको छ । डण्डामा मङ्गलबार एक सय पाँच दशमलव ८ मिलिमिटर, सोमबार एक सय ५७ दशमलव ८ मिलिमिटर र आइतबार ८७ दशमलव ६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
नवलपरासीको डण्डापछि बाराको कोल्भीमा सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको छ । कोल्भीमा तीन दिनमा तीन सय २५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । वरिष्ठ मौसमविद् कँडेलका अनुसार मङ्गलबार कोल्भीमा एक सय ६८ दशमलव ८ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ । सोमबार एक सय ५६ मिलिमिटर र आइतबार शून्य दशमलव २ मिलमिटर मात्र वर्षा भएको छ ।
यस्तै सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको सूचीमा कास्की तेस्रो स्थानमा छ । आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म कास्कीको घारे ढुङ्गामा तीन सय एक दशमलव ४ मिलिमिटर पानी परेको छ । मङ्गलबार एक सय १९ दशमलव ४ मिलिमिटर, सोमबार एक सय ६९ मिलिमिटर र आइतबार २४ मिलिमिटर वर्षा भएको तथ्याङ्क छ ।
यसैगरी गोरखाको आरुघाटमा तीन दिनमा दुई सय ८१ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । मङ्गलबार एक सय ६० दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको आरुघाटमा सोमबार एक सय ११ दशमलव ६ मिलिमिटर र आइतबार नाै दशमलव २ मिलिमिटर वर्षा भएको छ
यस्तै सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको सूचीको पाँचौ स्थानमा मकवानपुरको मकवानपुरगढी छ । त्यहाँ तीन दिनमा दुई सय ६६ दशमलव २ मिलिमिटर पानी परेको छ । मङ्गलबार एक सय ९९ दशमलव २ मिलिमिटर, सोमबार ५९ मिलिमिटर र आइतबार आठ मिलिमिटर वर्षा भएको छ ।
मौसमसविद्ले यसपाली आंशिकभन्दा धेरै वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढी पहिरोको जोखिम अझै रहेकाले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।
आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल साउन ०७ गते । बुधबार ।
गाडी बन्द, जहाज बन्द, होटल बन्द, शैक्षिक संस्था बन्द,अरु थुप्रै कुराहरु मा प्रतिबन्ध अनि लकडाउन चाहिँ कसरी खुला?
विद्यालयको फलामे ढोका खस्दा बालकको मृत्यु !
विराटनगरमा पनि आजदेखि फुड बैंक सञ्चालनमा !
September 1, 2020 September 1, 2020 Namastedainik